Purojekiti: Shiri Dzesango Dzisingagumi - Kunakidzwa neGoogle Mepu | Martech Zone
Purojekiti: Shiri Dzesango Dzisingagumi - Kunakidzwa neGoogle Mepu
Svondo, July 29, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ivo vanhu vane mutsa pamusoro pa Shiri Dzesango Dzisingagumi vakakumbira rubatsiro rwangu mukushandura kwavo mamepu ezvitoro kuenda ku Google. Kana iwe uchinetseka kuti nei ndanga ndakanyarara nguva pfupi yadarika, hazvisi nekuti ini ndakaburitswa kunze - imhaka yekuti ndiri kunyatso kubvarura kugogodza chirongwa ichi kubva mupaki!
Zvakare, ndiri kutanga basa idzva renguva yakazara muvhiki uye ndinoda kuve nechokwadi chekuti tinokwanisa kununura zvakanaka nguva yedu isati yasvika! Nekuda kweizvozvo, ndakanyorera vamwe rubatsiro ... Stephen anga achiita basa rakanaka uye imwe shamwari yangu, Todd, achange achitibatsira kukwidziridza nekuchenesa chero kodhi isati yasvika.
Muchidimbu, iko kunyorera kwakavakirwa muPHP, MySQL, uye Ajax uye inzira yevashanyi veShiri Shiri kutsvaga nzvimbo dziri padyo navo. Dhata rakachengetwa muKML mafaera kukwidzirisa mashandiro uye kutora mukana weazvino uye makuru maficha eGoogle Mepu API. Kune kumwe kuoma kuomarara futi sezvo data racho richichengetwa munzvimbo dzinopfuura imwe asi iri imwe heki yedambudziko rinonakidza.
Hechino chiratidzo che (chinoshanda zvizere!) Chikamu cheMutungamiri apo maMirairi anogona kupinda nekugadzirisa nzvimbo dzezvitoro zvavo pamepu:
Pachine basa shoma rekuita, asi kufambira mberi kwacho kwave kunakidza kusvika ikozvino. Isu tinofanirwa kurodha dhata reGeoIP kufanotaura nzvimbo yevashanyi, pamwe nekupa nzira kune chero nzvimbo kubva kukero yemushanyi. Zvinhu zvinonakidza! Iva nemoyo murefu, mumavhiki mashoma tinodzokera pane zvakajairwa.
Blog-Kubvarura: Alpesh Nakars 'Blogosphere
Killing Me (Blog) Zvinyoro
Jul 30, 2007 pa 7: 02 AM
Zvakanaka, Doug! Tichangobva kushandisa chimwe chinhu chakafanana Kufanirwa izvo zvichaparurwa svondo rino. Zvakafanana zvinoshanda, kunze kwekunge isu tiri kubvumira faira kurodha kwevatengesi uye tawedzera Canada zvakare. Cool stuff!
Oo, uye makorokoto pabasa idzva. Kutarisira kunzwa zvakawanda nezvazvo! /Jim
Jul 30, 2007 na8:20 PM
Zvinotaridza kunge chirongwa chiri kuuya zvakanaka, Doug. Ndine chokwadi chekuti unonakidzwa nekugadzira zvinhu zvekugadzirisa chirongwa chakaita seichi.
Kupa mazano anovandudza zvibodzwa zvebhizinesi remutengi wako zvinotaridzika sechinhu chakasimba kwazvo chako - basa rakanaka!